Kaalintee ayuu Nicolas Pepe ka galay xiddigaha Afrikaanka ah ugu qaalisan Taariikhda ama lacagaha ugu badan lagula wareegay? – Gool FM
(London) 01 Agoosto 2019. Kooxda Arsenal ayaa xaqiijisay saxiixa Nicolas Pepe, waxaana ay ka soo qaateen Lille oo ay ugala soo wareegeen adduun dhan 72 milyan oo gini oo u dhiganta 89 milyan oo dollar.
24-sano jirkaan ayaa qalinka ugu duugay Arsenal heshiis shan sanadood ah oo garoonka Emirates ku sii hayn doona illaa 30 bisha Juun sanadka 2024-ka, waxaana uu Arsenal u xiran doonaa maaliyadda lambarka 19-aad.
Kaliya ma’ahan inuu yahay xiddiga ugu qaalisan Arsenal, balse xiddigan xulka qaranka Ivory Coast ayaa sidoo kale noqday Afrikaanka ugu qaalisan Taariikhda.
Waxaan haddaba halkaan hoose ku eegeynaa shanta ciyaaryahan ee ka soo jeeda qaaradda Afrika ee lagula wareegay lacagaha ugu badan taariikhda amaba ugu qaalisan.
Nicolas Pepe oo ay maanta Arsenal ku soo qaadatay 89 milyan oo doolar ayaa ah Afrikaanka ugu qaalisan Taariikhda.
Cédric Bakambu oo Beijing Guoan ay kula wareegtay adduun dhan 79 milyan oo doolar ayaa ku jira kaalinta labaad ee xiddigaha Afrikaanka ah ee lacagaha ugu badan lagula wareegay, waxaana xiddigan reer Congo oo weerarka ka dheela lagala wareegay kooxda Villarreal.
Waa kaalinta saddexaad ka soo muuqday kabtanka xulka qaranka Algeria ee Riyad Mahrez, kaasoo ay Manchester City 72 milyan oo doolar uga soo iibsatay kooxda Liecester City.
Kaalinta afaraad waxaa ku jira xiddiga ay Pepe Arsenal ka wada tirsan yihiin ee Pierre-Emerick Aubameyang kaasoo ay Gunners kaga soo qaadatay Borussia Dortmund adduun dhan 68 milyan oo doolar.
Ciyaaryahanka ugu dambeeya ee kaa soo ka mid ah xiddigaha Afrikaanka ah ee ugu qaalisan Taariikhda waa kabtanka xulka qaranka Guinea ee Naby Keïta, kaasoo kooxda haatan uu ka tirsan yahay ee Liverpool ay 64 milyan oo doolar kaga soo qaadatay naadiga RB Leipzig.
Haddaba halkaan hoose ka eeg xiddigaha Afrikaanka ah ee ugu qaalisan Taariikhda:-